Chii chinonzi freelance? | Kugadzira uye zvidzidzo
Chii chinonzi freelance?
Maite Nicuesa | 06/11/2021 23:49 | Yakagadziridzwa ku 07/11/2021 00:16 | Jobho Kubuda
Nhasi, nyanzvi dzakawanda dziri panguva yechinjo mumabasa avo. Basa rebasa rinogadziriswa nezvinhu izvo dzimwe nguva zviri kunze. Uye denda iri rawedzera kusagadzikana kwemabasa mumhuri dzakawanda. Kuzvidzosera pachako uye kutsvaga mikana mitsva chiitiko chinogoneka. Kupfuura basa revamwe, pane zvakare nhamba inotora basa rakakura panguva ino: yekusununguka.
Iye inyanzvi, nyanzvi mune imwe nzvimbo, anoshanda akazvimirira. Inopa masevhisi ayo kushandira pamwe nemapurojekiti ayo anogona kupa tarenda rayo. Saka, Zvakanaka kuti munhu anoshanda akasununguka anowedzera zita rake nekugadzira peji rewebhu yaunopa masevhisi ako.
1 Zvakanakira nekuipira kuve munhu akazvimirira
2 Maitiro ekuita kuti vatengi vashande se freelancer
Zvakanakira nekuipira kuve munhu akazvimirira
A freelance Haasi nyanzvi inoshanda chete nepurojekiti imwe chete, asi ane mukana wekupinda mune akati wandei mazano. Ndezvipi zvakanakira kuva freelancer munharaunda yanhasi? Iyo nyanzvi inokwanisa kubata nguva yavo uye kuronga nekuchinjika kukuru kupfuura mushandi anoshandira mumwe munhu. Zvisinei, panewo chimwe chinhu chakashata zvikuru: kusava nechokwadi kwoupfumi.
Izvo hazvigoneke kuita yakatarwa yemwedzi wemari yekufungidzira nekuti huwandu hwebasa mukati megore hunosiyana zvichienderana neakasiyana maficha. Nokudaro, kuchengetedza mumatanho emabasa makuru kunobvumira gadzira mari yekukurumidzira uye yenjodzi yekutarisana nedzimwe nguva dzakatarwa nemari isingatarisirwe. Nekune rimwe divi, kushanda nevatengi vakawanda kunoderedza kusava nechokwadi kunowedzerwa kana nyanzvi ikawana mari yavo kubva kune imwe huru sosi. Kana iyo purojekiti ikasvika kumagumo, iyo mamiriro anoburitsa shanduko yenguva pfupi mumari yeanoshanda anoshanda.
Nekune rimwe divi, freelancer zvakare inowanzosangana nekurudziro iyo kutanga kwedambudziko idzva kunoburitsa. Izvi ndizvo zvazviri kana iwe uine mukana wekujoinha chirongwa chitsva pane dingindira rauri kuda.
Maitiro ekuita kuti vatengi vashande se freelancer
Sezvatareva, webhusaiti yehunyanzvi inova ratidziro yakanaka yekukwezva vatengi vatsva. Asi zvakakosha kuti nyanzvi itore basa rekuita kuti varatidze curriculum yavo kune mamwe mapurojekiti kwavanogona kuwedzera kukosha kwavo. Saka, unofanirwa kutaurirana nevateereri vako. Specialization yakakosha kuti freelancer azvimise senyanzvi mumunda waanoshanda.
Munhu ari kutsvaga basa remumwe munhu anopa CV yake kune basa raanopiwa. A freelancer, zvakadaro, anogona gadzira portfolio yebasa kuti ugovane mienzaniso iyoyo seratidziro yehunyanzvi hwako uye tarenda.
Kune maturusi ekutaurirana epamhepo aunogona kushandisa kuwedzera yako nyanzvi brand. Masocial network akakosha nekuti ane masvikiro makuru. Mamwe ma media ekunze akakosha pa network. Bhizinesi kadhi rine yakanyanya kumiririra data yeakasununguka: fomu rekuonana, masevhisi kana webhusaiti.
Iye freelancer anofanirwa kunyoreswa seye freelancer kuti ape masevhisi avo zvine hungwaru. Uye nekudaro, iwe unofanirwawo kusangana nezvisungo zvako padanho remutero. Nekune rimwe divi, zvakakosha zvikuru kuti munhu anoda kushanda akasununguka mune ramangwana adzidziswe kutsvaga kugona. Ramba uchifunga kuti kune kukwikwidza kwakanyanya muzvikamu zvakawanda. Uye, naizvozvo, ruzivo, pamwe chete nehutano hwebasa revatengi, inzira yekusiyanisa. Kune rimwe divi, ruzivo rwebasa, rwakabatana nekutora chikamu muzvirongwa zvakasiyana, runosimbisawo kudzidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi freelance?
Chii chinonzi anthropology?
Basa reCommunity manager nderei?